साइनो बेच्ने केटी :: Press Chautari ::
हाम्रो भेट एउटा संयोग । कारणवश प्रेमको विनिमय गरेका छौं हामीले यो मुलुकमा चाहेर वा नचाहेर । यद्यपि म यो भन्न विवश भएको छु आविया, हामीबीच भएका अन्तरंगका अनमोल पलहरु, तिम्रो स्पर्श र देहको न्यानोपन, मेरो अनुभूतिको घरमा काउकुती बनेर यसरी थुप्रीएको छ, जति पन्छाए पनि नपन्छने । तिमीसँगको औपचारिकता या केही भेटहरु मात्र पनि मेरो निमित्त प्रेमको अविस्मरणिय उदाहरण बनेका छन । हरेक पटक आउदा जादा मेरो अधरको क्यानभासमा तिम्रो ओठको स्पर्शले रंगाएर गएका कोमल चित्रहरु स्मृति भरिभरि कुदिएर बसेका छन । औपचारिकता मै किन नहोस तिमीसंगका प्रत्येक संवादहरु संगीत भरिएर कतै गुञ्जिएको म सुनिरहन्छु । तिम्रै शव्दमा भनुँ तिमीलाई असाध्य मिस गर्न थालेको छु म ।
तिमी भन्न सक्छौ–म प्रेमको नाटक गर्दैछु या तिमीलाई बहकाउने कोशिस । तर जे भन आविया, केही दिनयता मलाई यस्तै भएको छ, जुन हामीबीच हुनुहुदैन थियो ।
पत्र लेखि नसक्दै एकपटक पढ्छ र फेरी च्यात्छ । उसलाई किन के भै रहेको छ ? के उ आवियालाई प्रेम गर्छ त ? होइन उसले त केवल सम्झौता मात्र गरेको हो । उसको गैरकानुनी पेशा वा वसाईलाई बैध बनाउने जमर्कोमा उ भेटिई, बस त्यति हो । यो लिभ इन् केयरगिभरको झन्झटिलो पेशाबाट मुक्ति पाउन इजरायलमा त्यति सजिलो कहाँ थियो ?
दुई महिना अघिमात्र हो, आविया हामी दुवैलाई राम्रो हुन्छ भन्दै बिहेको प्रस्ताव लिएर आएकी थिई । बढ्तै घमण्डी भएर उसले सिधै इन्कार गरेको थियो । फेरी आज अचानक यो कस्तो अनुभूति उ भित्र बढिरहेको ? कतै प्रेम पलाउने कुरा त हैन ? कुनै हलक्क बढ्ने बिरुवा जस्तो ? त्यसो भए त्यो बिरुवा भर्खर रोपिएको हुनुपर्छ उसको मनको आँगनमा । आवियालाइ यो सब बुझाउन समय लाग्नेछ । उसले त जरुर यही सोच्नेछे–जेल परेपछि बचाउको उपायमात्र गरिरहेको छ उ । उसले सोच्यो, अहिले केही भन्दिन ।
तेश्रो पटक हो उ पक्राउ परेको । जेलमा छदा कस्ता कस्ता भावनाहरुले खेद्दा रहेछन । सासै बन्द होलाजस्तो उकुश मुकुश भएर आउछ । कति धेरै उमंग थियो त्यो बेला विकल्पहरु पनि अनेकौं थिए । त्यस्तै विकल्पहरु मध्ये भिषाको भरपर्दो उपाय उसले प्रयोग गरेको थियो । यहाँ प्रेमीप्रेमिका विवाहपूर्व नै संगै बस्ने चलन हुदोरहेछ । यदि कुनै इजरायलीको विदेशीसँग प्रेम सम्बन्ध रह्यो भने उसलाई आकष्मिक भिषा दिईनेरहेछ र त्यसैलाई यहाँ फ्रेन्डशिप भिषा भनिदो रहेछ । धेरै झन्झट पनि गर्नुपरेन एजेन्सीले नै सबै ठिकठाक मिलायो । महिनाको तीन,चार सय डलर बुझाउने शर्तमा आविया उसकी प्रेमिका भएर उसलाई भिषा दिन राजी भई । उसको फ्रेन्डशिप भिषा लाग्यो स्वतन्त्र भएर जहाँ पनि काम गर्न पाउने भयो । कमाइ पनि राम्रै हुनथाल्यो । साधारण केयेरटेकरको भन्दा तेब्बरसम्म हुन्थ्यो । तर उनीहरु साच्चिकै सम्बन्धमा छैनन् र भिषाकै लागि यो प्रपन्च गरेका हुन भन्ने थाहा पायो वा प्रहरीमा उजुरी पर्यो भने उसको भिषा बदर हुन सक्थ्यो । त्यही भयो कसैले पोल लगायो । ढुक्क के थियो भने पटक पटक आवियाले उनीहरुको सम्बन्ध झुठो नभएको बयान गर्थी र उसको बचाउ ।
आज पनि उसले यसै गर्नुपर्नेछ ।
फागु पुर्णिमा । तर सबै रंग उडेर गएजस्तो उदास र आफै भित्र रित्तो महशुश गरिरहेछ उ । काठमान्डूका गल्ली, पानीका लोला, पिचकारी र रंगीबिरंगी अबीरहरुको स्मृतिभित्र केहीबेर उ हराउछ । एकैछिन निस्कन पाए पनि हुने । नेपाली समाज इजरायलले तेलअभिभमा होली खेलौं मिलिजुलीको आयोजना गर्दैछ विदाको दिन कति रमाइलो भयो होला ?
होलीकै बेला यहा पुरीम भन्ने चाड पर्दछ । यी दुवै रंगीन उत्सवहरु वसन्त ऋतु आगमनका संकेतहरु हुन् । होली रंग छयापाछयाप गरेर खेलिन्छ भने पुरीममा चाहि रंगीचंगी पोशाक लगाउने कपाल रंगाउने विभिन्न चरित्र तथा पात्रहरुको नक्कल गरेर शहर डुल्ने । विशेष गरि केटाकेटी असाधारण र अनौठो फेशन गर्छन । पोहोर साल आवियाको भाइलाई उसले ढाकाको दौरा सुरुवाल मगाइदिएको थियो नेपालबाट । आफुले कुनै अवसरमा नलगाए पनि अरुले यसरी आफनो पोशाक लगाएर शहर डुलेको देख्दा खुब रमाइलो लागेको थियो उसलाई । राजा, रानी, परी, बन्नीहिरो, बेहुला, बेहुली, सुपरम्यान, जोकर र अवतारहरुको इन्द्रेणि लस्कर उसको कल्पनाको बाटो भएर गुञ्जन्छ ।
बाहिर घाम पोखिएको छ । यस्तो पारिलो घाममा समुन्द्रको छालमा तैरनु, बालुवामा उत्तानो पल्टनु वा जिउभरि डेड सीको माटो दलेर ढाड सेकाउनु । आवियासँग डेड सी घुम्न जाँदा सिकेको–त्वचा सुन्दर हुन्छ रे ।
धेरै निम्ताहरु व्यस्तताको कारण देखाएर आफै बदर गरि दिन्थ्यो । अवशेष जस्तो समयको डायरीमा आवियासँगै बिताएका दिनहरु त कति नै थिए र उसका ? यद्यपि आज यस्तरी पल्टिरहेछन ती पानाहरु, मानौं उसको छाती भित्र कुनै ठुलो आधिबेहरी मडारिई रहेको छ ।
सम्झौता बमोजिम महिनावारी बुझाउने बेलाबाहेक अरुबेला आवियासँग खासै उस्तो निकटता रहेन । फ्रेन्डशिप भिषा लगाएपछि शुरुको एउटा काम खोज्न चाहि उसले सघाएकी थिई । त्यो रिशोनको सुपर बाउलमा थियो – मार्करको । अलि टाढा र कम घण्टाको भएकोले पछि उसैले छोडीदियो । जुनसुकै क्षेत्रमा गर्न मिल्ने भएपछि कामको त केही दुख थिएन । पछि सुपरमार्केटमा काम गर्न थालेपछि भने उसको इष्र्या गर्नेहरु पनि धेरै भएका थिए ।
बेला बेला आविया निम्तो गर्थी । यस्तो बेला कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव छ भन्ने बुझ्नु पथ्र्यो । आफनो बसाईलाई वैध बनाउने बहानामा उसले यो एक बर्षमात्रै हजारौं डलर बुझाइ सकेको छ । पक्राउ परेपछिको वकील खर्च यसरी समातिदा काम नभएको अवस्था । यी सबै झमेलामा फस्दा उसलाई यो फ्रेन्डशिप भिषा जतिको झन्झटिलो केही लाग्दैन थियो । सोच्थ्यो बरु लिभ इन केयरगिभर मै गएको भए हुने । न कसैलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, न त भिसाको समस्या । जेल बाहिर निस्केपछि भने भोलीपल्टै यो सबै बिर्सन्थ्यो उ । अरु त सबै आनन्दले बसेकै छन दिनभरी तेलअभिभ डुल्ने खाने खेल्ने पैसा कमाउने कुनै व्यवधान छैन । अभागी खप्पर जहाँ गएपनि ठक्कर भनेझैं उसैलाई मात्र कसले पोल लगाउछ कुनी ? या उसको काम सेन्टरमा भएर हो या आवियाको घर टाढा भएर पो होकि या उ आफै अलि जोगिने कोशिश नगरेर हो ।। कारण जान्ने असफल प्रयास गर्छ ।
किन यति साहे कडाइ गरिएको यहाँ ? श्रम बेचेरै दुईचार पैसा कमाउन आएको विदेशीप्रति यो कस्तो अप्ठेरो कानुन ? यस्तो लाग्छ उ कुनै प्यालेस्टिनी सैनिक संगठन वा हमासको आतंककारी गुरिल्लामा भर्खर भति भएको छ र आत्मघाती विष्फोट गराउन इजरायल छिरेको छ ।
मुद्धा चल्यो, वकील लगाईए, मानव अधिकारवादी, हटलाइन र अन्य गैरसरकारी संघसंस्था सबैले आ आफनो स्थानबाट सक्दो प्रयास गरेका छौं भने । अन्ततः आज एक महिना दुई हप्तापछि उसले आफुलाई जेलमुक्त पायो । बेन गुरियन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै अनिच्छित यात्राको लागि पर्खिरहेको । उसको हातमा टिकट थमाईएको थियो घर फर्कने । उ भित्रको एउटा नेपाली आफनो घर फर्कन पाउँदा पटक्कै खुसि नभएको यो कस्तो निरिह स्वाभिमान उसको ? आफूखुसी काम गर्न र स्वतन्त्र भएर हिडन उसले रचेको यो सानो उपक्रम बारुदको खेति गर्ने देशमा किन मान्य हुन्थ्यो ?
फर्कने बेला कसैलाई भेटन पनि पाएन । अपार्टकै एकजनाले एअरपोर्टसम्म सामान ल्याइदियो । निराशाको अध्यारोले ढाकेजस्तो शुन्य थियो मन, जहाँ उसँग एउटा अर्थहीन गुनासो शेष रहिरह्यो आविया प्रति । त्यतिका पैसा लिएर पनि यसपाली प्रहरीसमक्ष र कोर्टमा उसले किन भनिन –हामी प्रेमीप्रेमिका थियौं ।
राम्ले कारागार, इजरायल
बुधवार, २०७० आश्विन ०२ गते २२:५६ / Wednesday, Sep 18, 2013 10:56 pm